Bajabulise izinkulungwane zabantu “oTakalani Sesame” | Eyethu News
Headless torso ‘could be’ journalist from Danish submarine - 6 hours ago
Trump strategy won’t solve Afghan problems, say analysts - 6 hours ago
Bajabulise izinkulungwane zabantu “oTakalani Sesame”
ITakalani Sesame ivakashele odado baKwaDukuza.
Abantwana abalinganiselwa ezinkulungwaneni ezimbili bathokozile ngesikhathi bezibonela oTakalani Sesame.
BEKUYINJABULO yodwa kubantwana abalingaliselwa ezinkulunganeni ezimbili ngesikhathi bebuthene enkundleni yezemidlalo edolobheni laKwaDukuza ngempelasonto ukuzozibonela ngamehlo ‘oTakalani Sesame”, bodumo lukamabonakude.
Ukufika koTakalani Sesame, nokungabalingisi abasapopayi bohlelo lwezingane olubonakala ku-SABC 1, kule ndawo yaKwaDukuza, bekuyingxenye yomkhankaso kazwelonke wokubambisana phakathi kwenkampani yakwaSanlam, kube yi-SABC Education kanye noMnyango wezeMfundo yesiSekelo, nokuhloswe ngawo ukuqwashisa imiphakathi ngokuphathwa ngendlela kwezimali, kanye nokuhlomisa abantwana ngamasu ahlukene empilo kuhlanganisa nezindlela kanye nokubaluleka kokonga inkece.
Bathathu oTakalani abebetheleke edolobheni laKwaDukuza, kanti abazange babaphoxe nakancane abalandeli babo abebegcwele phama enkundleni yezemidlalo ukuzozijabulisa, kanye nokuzotitiliza indathane yemiklomelo ebitholakala njengengxenye yalo mkhankaso.
Izindawo zaKwaZulu-Natal ezibe nenhlanhla yokuthi zisingathe lo mkhankaso yiKwaDukuza kanye naseManguzi, kanti ezinye izifundazwe lapho lo mkhankaso uzobuye usingathwe khona kubalwa iGauteng, yi-Eastern Cape kanye neWestern Cape.
Lowo oyinhloko yezokukhangisa kwa-Sanlam Sky Solutions, uMnuz Tendani Matshisevhe uthe, “Njengenkampani sizinikele ekutheni siqhubeke nokuqhamuka nezindlela zokutshala imali emiphakathi nokuthi siqhubeke nokuthuthukisa imiphakathi. Kule nkampani siqhuba ibhizinisi lokwenza imali yamakhasimende ethu ibe nenzuzo ebonakalayo ukuze amakhasimende akwazi ukuphila izimpilo ezingcono. Ngesikhathi abantwana bezithokozisa ngemidlalo ehlukene kanye nemidanso yoTakalani, siyaye sigqugquzele abazali ukuthi baxhumane nabeluleki bethu bezezimali bathole iseluleko samahhala mayelana nezindlela ezingcono zokuhlela izindaba zabo zezimali.”
UNompumelelo Hlongwane oneminyaka eyishumi nanye uthe kumujabulise kakhulu ukuzibonela ngamehlo abangani bakhe bakumabonakude oTakalani Sesame.
Izinkumbi ziphelelwa wumsebenzi eHammarsdale
Imibuzo ngamakhandlela nesikhova kusha umuzi e-HDE
Inkomo ‘ibulale’ umgibeli wesithuthuthu eMgungundlovu
Kuphoxe ukuhlwa ngomqhudelwano wezibhedlela eThekwini
Unephupho lokuvula isikole semfashini ozokhangisa kowe-DFF
Usulungisiwe umuzi owangenwa yimoto, KwaMbambo
Wenza ezibukwayo umphaquli osemusha wase-Richmond ngethalente lakhe
Kuzodingidwa ngenkozo yesikhumbuzo yezisulu eziyi-19
Kudutshulwe kwabulawa abantu abane kaDambuza